Soo Saaraha iyo Warshada Saxan Oval Oval ugu Fiican | Tuoda
TD-DG-CJ-001 Saxan Oval ah
Qaab dhismeedka Oval-ka ah oo aan jabin karin, saxannada cashada ee cawska sarreenka ah, 11.5 ″ weelka weelka iyo weelka mikrowave saxannada badbaadsan, dib loo isticmaali karo deegaanka-saaxiibtinimo BPA bilaash ah
Cabirka Alaabta 29.5*18cm
Miisaanka Shayga 120g
ALAABAHA JIRTA & BEESHA KU SAABSAN– Alaabada cashada ee tayada wanaagsan waxay ka samaysan tahay caws qamadi dabiici ah iyo walxo istaarij ah. la cusboonaysiin karo iyo sidoo kale waara, ka dhigaya kuwa aan sun ahayn, BPA Free, PVC-free, freel-lead, cadmium-free, la ansixiyay iyo heerka cunto, badbaado iyo caafimaad u leh qoyskaaga.
AAN LA JEBIN & FUDUD - Miisaanka: 4.3 OZ, Taarikadayada cawska sarreenka ah ee raagaya waa kuwa adag oo waara, adkaysi u leh, Microwave iyo weel dhaqida badbaado leh (ilaa 248 ℉), jajab u adkaysta, wasakh u adkaysta oo si sahlan loo nadiifiyo, beddel wanaagsan oo saxan caag ah.
FADLAN- Taarikada xafladdayadu waxay si fiican ugu habboon yihiin qurxinta jikada. Taargo ku habboon cunto fudud, salad, baasto, baasto, oo ku habboon quraacda, brunch, qado, casho, cunto fudud oo saqda dhexe ah iyo wax kasta oo ka dambeeya.
DHAQAN & QARAN - Size: 11.5" x 7" saxan casho ah oo weyn oo loogu talagalay qaab badbaadinta meel bannaan iyo geeso siman, sidoo kale waa la isku dhejin karaa, oo ka dhigaya kaydinta mid degdeg ah.
Hadiyad qaali ah - Saxankan Casho waxa lagu baakadeeyay sanduuq si fiican loo duudduubay, oo ah hadiyad wax ku ool ah oo saaxiibbadaa iyo qoyskaaga ah ee Housewarming, xafladda arooska, Maalinta Hooyada, Maalinta Aabbayaasha, Christmas iyo Maalinta Sannadka Cusub.
Hore: 30 OZ caws weyn oo qoto dheer oo qamadi ah Salad Salad
saxan oval ah
cawska sarreenka taarikada oval
Qalab-cawska qamadiga ah oo la dhigay alaab-cuntada
Biyodegradable 300ml dhalada biyaha qamadiga ah